Fitsidihan’ny Masoivoho frantsay tany Mahajanga - La France à Madagascar
Accueil > Actualités > Toutes les actualités > Fitsidihan’ny Masoivoho frantsay tany Mahajanga
Fitsidihan’ny Masoivoho frantsay tany Mahajanga
Mahajanga no toerana ivelan’ny renivohitra nitsidihan’ny masoivoho frantsay eto Madagasikara voalohany hatramin’ny nisian’ny krizy ara-pahasalamana. Araka’izany, afaka nifanakalo hevitra tamin’ny manam-pahefana tao an-toerana izy momba ny resaka fiaraha-miasa itsinjaram-pahefana sy momba ny fanampiana ho amin’ny fampandrosoana. Nihaona tamin’ireo mpisehatra eo amin’ny lafiny ara-toekarena ihany koa izy ary nandray anjara tamin’ny fikaonan-doha fanaon’ny Alliances Françaises de Madagascar isan-taona . Afaka nitsidika ny kolejy Dolto, izay toeram-pampianarana frantsay ko izy tamin’ny farany , ary nihaona tamin’ny vondrom-piarahamonina frantsay niaraka tamin’ny Consul Honoraire frantsay, Atoa Ikbalhoussen.
Fitsidihan’ny orinasa frantsay.
Nitsidika ireo orinasa frantsay misy ao an-toerana (Petroleum Logistics (LPSA), Pêchexport ary Vitogaz) ny masoivoho frantsay niaraka tamin’ny lehiben’ny sampana ara-toekarena ao amin’ny Masoivoho frantsay, Atoa Choblet. Ireo orinasa ireo dia mandray anjara amin’ny fampandrosoana ny faritra.
Fahatsiarovana ny tsingerintaona faha-20 an’ny toerana kolontsaina vita nanahary Antrema.
Ny fitsidihan’ny masoivoho frantsay dia nifanojo indrindra tamin’ny fahatsiarovana ny faha-20 taonan’ny toerana kolontsaina vita nanahary Antrema.
Nitsidika ny toerana ny masoivoho, niaraka tamin’ny manam-pahefana teo an-toerana, ny governoran’ny Faritra Boeny, ny Prefen’i Mahajanga ary ny lehiben’ny distrikan’i Mitsinjo, ary ny talen’ny departemantan’ny faritra voaro eto Madagasikara ao amin’ny ministeran’ny tontolo iainana sy fampandrosoana maharitra izay manara-maso ny faritra voaro.
Ny toerana kolontsaina vita nanahary Antrema, dia faritra voaron’ny firaisa-monina iaraha-mitantana amin’ny Musée d’histoire naturelle de Paris (MNHN) sy ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana hatramin’ny namoronana azy tamin’ny 2000. Nitsidika ny tanàna masina Doany ny Masoivoho, toerana tsy fahita maneran-tany izay mampiantrano ny gidro masin’ny Antrema antsoina hoe Sifaka. Hitany tamin’io fotoana io ny hatsaran’ny asa fiarovana notontosain’ny andrim-panjakana frantsay sy malagasy nandritra ny 20 taona, niaraka niasa akaiky tamin’ny fiaraha-monina. Ny tanjon’ny MNHN dia ny fahazoana ny fanomezan-pahefana ny fitantanana ny faritra hahafahana manankina ny fitantanana io faritra amin’ireo vondrom-piarahamonina ireo. Afaka nitsidika ny valan-dranomasina ao anatin’ny ny faritra voaro eo amin’ny helodranon’i Boeny koa ny Masoivoho, ary nahita fototra ny fitandroana lavorary ny alan-konko mikitrokan’ny dobon-tsiraka.
Fihaonana amin’ny vondrom-piarahamonina frantsay.
Nitsidika ny Kolejy Dolto ny Masoivoho, niaraka tamin’ny Mpanolon-tsaina momba ny fiara-miasa sy ny hetsika ara-kolontsainan’ny ambasady frantsay , Atoa Perez, ary ny Consul Honoraire frantsay an’ny Mahajanga, Atoa Ikbalhoussen. Ny fitsidihana an’ity toerana izay nankatoavin’ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena frantsay ary voafehan’ny AEFE amin’ny fifanarahana manokana dia nampisongadina ny toerana hianaran’ireo mpianatra. Nihaona tamin’ny ray aman-dreny voafidy ao amin’ny APE ny Masoivoho ary niresaka momba ny fiarovana ao amin’ity toerana ity koa momba ny fivoahana amin’ny krizy ara-pahasalamana (fepetra fandraisana ny mpianatra ; fampiharanany fombafomba ara-pahasalamana, sns.).
Afaka nitafa tamin’ny vondrom-piarahamonina frantsay ihany koa ny masoivoho nandritra ny korana nifankahitan’izy ireo
Fikaonan-doha fanaon’ny Alliances Françaises de Madagascar isan-taona.
Ary farany, nandray anjara tamin’ny lanonana fanokafana ny fikaonan-doha fanaon’ny Alliances Françaises de Madagascar isan-taona ny Masoivoho. Afaka niresaka tamin’ny filoha sy talen’ny Alliances Française 29 misy eto Madagascar izy, ireto farany moa nanoritsoritra ny zava-misy ao amin’ny Alliances tsirairay avy , ny hetsika natao hatramin’ny taon-dasa ary koa ireo tetikasa vaovao nampiharina nandritra ny fanibohana.